how to write literature review for thesis ppt how to writeacompare/contrast research paper university of pittsburgh creative writing minor writingathesis statement foraresearch paper dissertation writing services dissertation writing services usa phd dissertation proposal in finance university of victoria creative writing mfa how to writealong conclusion foraresearch paper dissertation assistance writing how to write an introduction foramarketing research paper draft dissertation proposal template legal topics to write research paper free samples of writingadissertation how to writeagood personal statement for college apps how to writearecommendation letter foraprom what do you write inapersonal statement for college how to writearecommendation letter forabad student writing your dissertation introduction what to write in letter of recommendation for graduate school how to write personal statements for law school cool animals to write research paper about 6th grade brown university mfa creative writing gre how to write method section in research paper struggling to write personal statement how to writeareference inaresearch paper pay someone to write personal statement scholarly articles on writingadissertation free online dating service reviews skills students need to writearesearch paper how to write introduction of research paper example review results of my dissertation committee writing felloships for dissertators how to writeachi omega recommendation letter how to writealetter of recommendation 14 steps with how to writearesearch paper in machine learning apa writing the title ofadissertation inapaper how to writeadiscussion section for research paper online 1099 service reviews what to write inamedical school personal statement dissertation proposal teachers college online computer support services reviews for home computers how to plan your dissertation proposal southern illinois university mfa creative writing tuition methodology statement for dissertation dissertation proposal tense university of virginia mfa creative writing how to write paper on research university of adelaide creative writing how to writea3 page research paper fast canacustomer writeagrad school letter of recommendation dissertation proposal wiki how to writealetter of recommendation for volunteering academic dissertation proposal sample university of iowa creative writing nonfiction yale university creative writing how to writeahook for an argumentative research paper political subject i could writearesearch paper on thesis writing services custom dissertation how to writeauk university personal statement glasgow university creative writing example portfoliosadissertation proposal example asking write your own letter of recommendation university of michigan mfa creative writing courses how to writealetter toateacher about recommendation writtingagood graduation teacher assistant recommendation letter methodology definition dissertation dnp oral defense of dissertation proposal should you write law school personal statement on immigration how to write an abstract foraresearch paper uk online phone service reviews university of boulder creative writing mfa arizona state university mfa creative writing gre dissertation proposal methodology how to write summary ofaengineering research paper online dating service reviews how to write the abstract ofaeconomics research paper how to writealetter of recommendation for lawyer colleague how to writeanon fiction research paper review online credit repoting services how to writeapersonal statement for college admission sample msc dissertation proposal example pdf university of arizona dual degree creative writing how to writeacomparative literature review how to writearesearch compare and contrast paper how to write your personal statement for seminary who to write recommendation letter how to writeamethods section ofaliterature review how to writeapersonal statement mfa the student room how to write an excellent personal statement how to writeamethodology foraliterature based dissertation online document signing services reviews online backup service reviews 2014 why do we writearesearch paper how to writearesearch paper on childhood obesity how to writearecommendation letter music how to write an introduction foraresearch paper sample online styling services reviews arizona state university tempe mfa creative writing how to writearecommendation letter for book university of alaska at fairbanks mfa creative writing chester university uk creative writing ma how to write literature review on project catholic dating online service reviews thesis and dissertation writing without anguish how to writeagood literature review uk literature review paper writer dissertation writing services ll occasionally send online university of richmond creative writing courses lab coordinator write letter of recommendation medical school pharmcas letter of recommendation who needs to write them online mastering services reviewed creative writing university ranking how long did you write your personal statement sdn chemistry dissertation proposal ammonia transport how to write the best law school personal statement how to write an extensive research paper researching and writingadissertation for business students pdf free online review for civil service exam how to write effective literature review ohio university english creative writing how do i writeacollege research paper apa style creative writing programs in universities oklahoma how to writeaucas personal statement for business how to writearesearch paper case study how to writearesearch paper on gay marriage is theiragpa requirement for writingadissertation how do you write the author name in research paper uw madison requirements for dissertation proposal for communication doctorates new york university creative writing summer program how to writeapublishable research paper how to write interview inaresearch paper brown university mfa creative writing deadline indiana university mfa creative writing program deadline 2017 how to write an 11th grade research paper how to write good research paper introduction creative writing university of miami howatacher writearecommendation letter toauc how to write the title foraresearch paper person who writesaletter of recommendation university of dublin masters creative writing pacific luther university creative writing classes request to writearecommendation letter sample how to writeaone page personal philosophy statement how to writealiterature review forabook step by step how to writeapsychology research paper how to writeapersonal statement for primary teaching dissertation proposal economics phd how should i write phd in my personal statement how to writeapersonal mission statement for college how to write smp personal statement site www.reddit.com tips for writing your dissertation open university creative writing ba how to write research paper on ancient athens how to write personal statement usmle how to writeapersonal statement for grad school music university of victoria british columbia mfa creative writing how to writeapersonal purpose statement dissertation proposal process how to writeathesis statement foraresearch paper how to writearesearch paper on horses difference in support and encouragement during the dissertation writing process how to writearesearch paper about alcohol how do you writearesearch paper without plagiarizing time to write research paper tls how to writeapharmacy residency letter of recommendation how to writeacivil rights research paper criminal records review program online service how to writeatitle for your research paper how to writeanutrition literature review canasupervisor writealetter of recommendation degree dissertation proposal how to writeapersonal statement for teaching training how to writearesearch paper onacontroversial issue can you writearesearch paper in first person how to write significance of the study in research paper psychology dissertation methodology example tulane university assistant professor position creative writing vanderbilt university mfa creative writing writeagood thesis statement foraresearch paper help with my dissertation proposal how to write recommendation for research paper how to writearesearch paper questionnaire how to writearesearch paper in mechanical engineering creative writing uk universities ranking how to writeapersonal statement for social work masters how nto writearesearch paper in apa format dissertation proposal presentation template brighton university creative writing phd university of st thomas mfa creative writing what chapters are need foradissertation proposal new york university mfa creative writing program things to writeahitory research paper on creative writing wayne state university university of kansas creative writing program how to writeareview of literature article civil service exam review online creative writing course brighton university can you write about personal experience in research paper how to writearesearch paper based onabook how to writearesearch paper in latex dissertation writing applicaiton letter of recommendation writer online teaching middle school how to writearesearch paper professor asked me to write letter of recommendation reddit oregon state university creative writing indiana university mfa creative writing faculty online computer repair service reviews average pages for dissertation proposal how to writeagreat personal statement for pa school top 10 things to writearesearch paper about who should i ask to writealetter of recommendation find someone to writearesearch paper university of houston creative writing minor personal statement medical school what to write about how to writeapersonal statement for s i am honored to write this letter of recommendation quickest way to writealiterature review university of chicago creative writing lecture university of kent english and creative writing how to writeaproposal letter foraresearch paper writeapersonal statement for residency how to writearesearch paper oxford university how to writeagood mba recommendation letter how to properly writearesearch paper topic selection how to write literature review section please write mealetter of recommendation example dissertation research methodology pdf how to write an abstract foraliterature review paper can i pay someone to write my personal statement how to writealiterature review for med research paper how to writearecommendation letter request for law school how to writeagood recommendation letter for an intern university of virginia mfa creative writing apply university of central florida mfa creative writing writingagood dissertation title university of iowa creative writing grad program university of louisville mfa creative writing topics to writearesearch paper over how to writeapersonal statement foraprogram examples how to writearesearch paper on the everglades writing chapter4dissertation best books on how to writearesearch paper quora dr mark barron university of south dakota dissertation proposal guide online reviews for air conditioning service palm beach county what to write in personal statement for lpc top universities for creative writing in the world dissertation research proposal dissertation title proposal how to writearesearch paper aboutacountry how ot write research paper in one night how to writearesearch paper outline in apa entrepreneurship dissertation proposal please write mearecommendation letter how to writeagood background foraresearch paper how to write algorithm in research paper how we writealiterature review how to writealiterature review withinaresearch paper how to writearesearch paper for kids episode2university of alabama creative writing camp how to writeaprofessional personal statement do i need to writealot for personal statement how to writearecommendation letter forajob applicant how to writeagood personal statement about yourself personal statements how to write for med school how to writearesearch literature review example how to writeaeagle scout personal statement how to write the first draft ofapersonal statement how to writeapersonal statement for volunteer work marketing dissertation proposal ideas writing an outline foraresearch paper apa resume personal statement writer what is dissertation proposal justification kettering university creative writing faculty writingadissertation in markdown with git how to writealetter of recommendation for yourself examples how to write and introduction foraliterature review important things to write literature review university of east anglia creative writing scholarship custom dissertation defense powerpoint writing services online german university phd creative writing how to write literature review in ppt example how to writea7 page research paper easy how to writealiterature review how to writeageology research paper what to write on personal statement for university online review services how to write an amacs recommendation letter how to writeagood research paper for science fair dissertation proposal umbc free university courses online creative writing how to writeamethodology section ofadissertation how to writeabackground toaresearch paper csr dissertation proposal how to writeacollege research paper mla format i was asked to writealetter of recommendation xps online shipping service reviews how to writearecommendation letter forakid how to write statement of problem in research paper how to write an education literature review we write your research paper
ဒီတခါတော့ ကျွန်တော့် ပရိတ်သတ်တွေ ကို ကျောက် ငုတ်ကျင်းတွေဆီ ခေါ်သွား မယ်။ အချိန်ကာလ အားဖြင့် ကျွန်တော် တို့ လုံးခင်း နယ်မှာ ထည်လုံးစိမ်းမှော်…
သင့်ရဲ့ တသိန်းတန်တဲ့ အချိန်တွေကို တထောင်တန်အလုပ်မှာ မကုန်ဆုံးမိစေနဲ့
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ခန့်က ကျွန်တော်က ဖါးကန့်ကျောက်ဝိုင်းမှာ ဝယ်ရောင်းလုပ်နေချိန် မိုးကြီးက ပွဲစားပေါ့ သူက ယူမာအရှေ့ဘက်က ကြံခတ်ရွာမှာနေတယ် တရက်မှာ ကျွန်တော်ကျောက်တလုံးဝယ်ရတယ် မနက်ပြန်ရောင်းဖို့ ပွဲတိုက်မှာ…
ကျောက်တလုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်သတိပြုစရာအများကြီးရှိပါတယ်…လူတိုင်းကျောက်ဝယ်တတ်ပါတယ်…ဒါပေမယ့်အမှားနည်းအောင်..အကျိုးအမြတ်ရအောင်ဝယ်တတ်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူး.. ကျောက်ပညာကျွမ်းကျင်မှဖြစ်မှာပါ…ကျနော်ကျောက်ပညာစသင်စဉ်ကပထမတော့ပွဲစားပေါ့…၂ နှစ်လောက်အကြာမှာတော့ကျောက်စဝယ်ပါတယ်….ပွဲစားဘဝမှာသိန်းကျောက်..ဆယ်ကျောက်တွေရောင်းဘူးပေမယ့်တကယ်ကိုယ့်ဘာသာဝယ်တော့မယ်လဲဆိုရောရူံးမှာကြောက်ပြီးမဝယ်ရဲဘူး…ပွဲစားဘဝကနေကုန်သည်ဝယ်ရောင်းဘဝပြောင်းလဲခဲ့ရတာကခံစားချက်တခုကြောင့်ဆို၇မှာပါ..ပွဲတပွဲတည့်အောင်တိုက်ဖို့ရာ တကယ်တော့မလွယ်ပါဘူး…တခါတလေပွဲခလေးနဲ့တောင်လန်သွားတတ်ပါတယ်…သူတို့ကုန်သည်အချင်းချင်းကငွေရှိတာမို့ကိစ္စမရှိပေမယ့်ကိုယ်တွေကပွဲတည့်မှအဆင်ပြေမှာမို့ပွဲခလေးနဲ့လန်သွားတယ်ဆိုရင်အရမ်းခံစားရပါတယ်…တချို့ကုန်သည်ကအရမ်းရူံးလို့မရောင်းတာကိုနားလည်လို့ရပေမယ့်မြတ်ရဲ့သားနဲ့ပွဲခလေးနဲ့ကပ်လို့မတည့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တိုမိတယ်…ဒါကြောင့်ကျောက်ပညာအနည်းငယ်တတ်လာတဲ့အခါမှာသူတပါးကိုမှီခိုနေရတဲ့ပွဲစားတော့မလုပ်တော့ဘူးကွာ.ကိုယ့်ဘာသာဝယ်ရောင်းလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးဝယ်ရောင်းစလုပ်ခဲ့ပါတယ်… ပွဲစားလုပ်ရင်းအနည်းငယ်စုဆောင်းမိခဲ့တဲ့သောင်းဂဏန်းငွေလေးနဲ့ဘဲရာကျောက်ထောင်ကျောက်လေးတွေလိုက်ဝယ်ပါတယ်..ရူံးမှာအရမ်းကြောက်တဲ့အတွက်သွေးပြီးသားအပွင့်တွေထဲကလုပ်ချက်ကျန်တဲ့ပြင်ပွင့်ကျောက်တွေကိုဘဲဝယ်ရဲပါတယ်..စဝယ်စဉ်ကတော့တဝက်အနဲ့ဆုံးရူံးပါတယ်..ဝယ်ရောင်းလုပ်လိုက်ရူံးလိုက်..ပွဲစားပြန်လုပ်ပြီးငွေစုလိုက်နဲ့လုံးချာလိုက်နေပေမယ့်တနေ့တော့လည်းလမ်းမှန်ရောက်သွားတာပါဘဲ… ဒီနေရာမှာကျနော့ဆရာပြောခဲ့တဲ့စကားတခွန်းရှိပါတယ်…ကျောက်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်”များများကြည့်..နဲနဲဝယ်..စားတာမကုန်..မှားလို့ကုန်”ဆိုပြီးသင်ပေးခဲ့ပါတယ်…တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားမို့ယနေ့ဆရာတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျနော့တပည့်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဆုံးမလေ့ရှိပါတယ်… လောဘကြောင့်လဲကျောက်ရူံးတတ်ပါတယ်..တကယ်တော့ကျောက်တလုံးမှာသူလက္ခဏာနဲ့သူ အပွေးမန်းတွေ..ကြိုးတွေ..ယမ်းတွေရှိပါတယ်…အဲဒါတွေကိုသေချာလေ့လာမကြည့်ဘဲလောဘကြောင့်ကိုယ်ထင်သလိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဝယ်ရင်တော့ငါးပါးမကဘဲသံဃာစင်ပါမှောက်တော့တာပါဘဲ…. ကျနော်ကျောက်တလုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစလုပ်ဖြစ်တာက..ဥပမာ ဖြတ်သားဆိုရင်ဖြတ်နန်းကိုမဖွင့်သေးဘဲအုပ်ထားပြီးကျောက်ရဲ့မန်းအသွားအလာ..မျိုးတန်း.ကောင်းမကောင်း..အသားကောင်းမကောင်း.ကျောက်ရည်ကပဲလား..စိမ်းရည်လား..အဝါရည်လား..ကန်စွန်းရည်လား..အတွင်းမှာမောက်ရှိနိုင်လား…အဆံရှိနိုင်လား..အသားခံပြာလား.မိူင်းလား..ဘယ်မှော်ဖြစ်မလဲ…မှော်စီ စာလား.မှော်မောင်းလျန်လားစသဖြင့်မှော်ကိုလည်းဝေဖန်သုံးသပ်ရပါတယ်.. အဲဒီလိုသုံးသပ်ပြီးမှကျောက်အတွင်းထဲမှာဘာရှိနေမယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်…ကိုယ်ထင်မြင်ယူဆချက်အတိုင်းအတော်များများတူနေရင်တော့အရမ်းပျော်ရွှင်ရပြီးခန့်မှန်းတာနဲ့လွဲရင်တော့ဘာကြောင့်လွဲတယ်ဆိုတာအဖြေပြန်ရှာရပါတယ်…ဒါသည်ဘဲကျောက်ပညာလေ့လာခြင်းပါ… လေ့လာလိုမကုန်နိုင်လောက်အောင်ကျောက်ပညာဟာနက်နဲပေမယ့်ကိုယ်သန်ရာလိုင်းတခုကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာ၇င်တော့အောင်မြင်တဲ့ကျောက်သမားတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာပါမယ်… နောက်တခုကကျောက်ဝယ်မယ်ဆို၇င်အပွင့်ဖြစ်ဖြစ်..တစ်စဖြစ်ဖြစ်..ဖြတ်သားဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ချက်သုံးချက်ပါ၇င်လုံးဝမဝယ်သင့်ပါဘူး..ကျောက်တိုင်းအပြစ်လေးတော့ရှိမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဘဲကျောက်တိုင်းအပြစ်ကင်းတာရှားပါးလွန်းပါတယ်..ဒါပေမယ့်ပြစ်ချက်၂ချက်တဲ့ကျော်တဲ့ကျောက်ကိုဝယ်မိ၇င်တော့ရူံးဖို့ရာခိုင်နူန်းအတော်များသွားပါပြီ… ဘယ်လိုပြစ်ချက်တွေလဲဆို၇င်အနာများခြင်း..ဖားဥပြုတ်အဆံများခြင်း…အသားခံပြာခြင်းရိပ်ခြင်း..ချွမ်ဖောက်ခြင်း..မှဲ့ပါခြင်း..အသားလျော့ခြင်း…မှော်တိမ်းခြင်း..ပုစွန်ခြေရာပါခြင်း..ယမ်းကြမ်းခြင်း..စသဖြင့်ပြစ်ချက်များစွာရှိပါတယ်…အဲဒီပြစ်ချက်တွေထဲက၁ခု၂ခုလောက်ဘဲငြိတဲ့ကျောက်ကိုသာဝယ်သင့်ပါတယ်..အမှားနဲပါလိမ့်မယ်…..
ကျောက်စိမ်း အသွေး အရောင်များ
ကျောက်စိမ်း အသွေး အရောင်များ ကျောက်စိမ်းသည် မြမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး ကျောက်၏ အရည်အသွေး အရောင်အဆင်း (၃၄)မျိုးရှိသည်။ယင်းတို့အနက် ထင်ရှားသော အရည်အသွေး အရောင်အဆင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်ဖြစ်ပါသည်။ (က) ပိုးမည်းတောင်ဇာကောင်၏…
၁၀သိန်း၅သောင်း တစ်ပြားမှ မလျော့ပါ ၅သောင်းက ရွာပြန်ဖို့ ကားခနဲ့ ထမင်းဖိုးတဲ့
လုံးခင်းဘက်က လောပန်းတစ်ယောက်က မြေစာပုံနဲ့ ကျောက်ထွက်တဲ့နေရာတွေဆီ ကျောက်အသင့်တင့်နားလည်တဲ့သူ့လူယုံတွေ ကားနဲ့လွှတ်ပြီး ရေမဆေးကျောက်ဝယ်ခိုင်းတယ် တစ်ညနေတော့ ကောင်လေးတယောက် ကျောက်ရလာတယ် ကျင်းထိပ်မှာတင်ဘဲ လူယုံအဝယ်တော်ကို ကျောက်ပြရောင်းတယ် ဘယ်လောက်လဲမေးတော့ ??…
သိန်း ၁၀၀ အိပ်မက်ကြောင့် သိန်းပေါင်း သောင်းကျော်လွဲခဲ့ရတဲ့ ရေမဆေးကျောက်ရှာသမား
နာမည်က ငတိုးတဲ့။ပခုက္ကူနယ်ထဲက ရွာသားလေးပေါ့။သူ ရွာကနေ ဖားကန့်ကို ထွက်လာခဲ့တယ် အိပ်မက်တစ်ခုဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ပေါ့။သူအိပ်မက်က သိန်း ၁၀၀ ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ပေါ့။ ငတိုးလည်း ဖားကန့်ရောက်တော့ ရေမဆေးကျောက်တွေ ရှာလာလိုက်တာ တစ်ရက်မှာတော့…
ဆေးဆိုးကျောက်အဝယ်မှားပြီးတဲ့နောက် အကြွေးတွေနဲ့ အိပ်ပျက်ညတို့အလွန်
ဘဝဆိုတာသင်္ချာပုစ္ဆာတပုဒ်လိုပုံသေတွက်လို့မရပါဘူး….ဆေးဆိုးကျောက်အဝယ်မှားပြီးတဲ့နောက်မှာကျနော့ဘဝရဲ့နေ့ရက်တွေဟာခါးသီးလွန်းလှပါတယ်…သိန်းသုံးရာတင်နေတဲ့အကြွေးကိုဘယ်လိုဆပ်ရမလဲစဉ်းစားလို့မရခဲ့ပါဘူး…သန်းခေါင်ကျော်လန့်နိုးလို့ဒီအကြွေးအကြောင်းစဉ်းစားရင်းမိုးလင်းခဲ့တဲ့ရက်တွေသာများလာခဲ့ပါတယ်.. ငွေထုတ်ပေးသူတယောက်နဲ့လုပ်ငန်းပြန်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်မရတာမို့သုံးလေးလအကြာမှာလမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်..ဒီသုံးလေးလတွင်းရခဲ့တဲ့အကျိုးအမြတ်၁၅၀ကလည်းအတိုးပေးရတာရယ်.အိမ်အသုံးစရိတ်နဲ့တင်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတော့ပါဘူး… ကျနော်လျှောက်ရမယ့်လမ်းကိုယုံကြည်မူရှိစွာလျှောက်၇ပါတော့မယ်….စွန့်မှစားရတော့မှာမို့အိမ်ပေါင်ဖို့ဘဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်.. အိမ်ကိုသိန်းငါးရာနဲ့ပေါင်ပြီးဖားကန့်တက်ခဲ့ပါတယ်…နေသာတဲ့နေ့..လသာတဲ့ညတွေဟာတနေ့တော့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်…ဖားကန့်ရောက်တဲ့ညမှာဘဲအသားဆန်း.အရည်စွဲကျောက်တလုံးရှိတယ်လို့သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီကသတင်းကြားရတယ်…ကျနော်ကအသားမြင့်တဲ့မျိုးကောင်းတဲ့ကျောက်တွေကိုသာအများအားဖြင့်ရွေးချယ်ဝယ်ယူလေ့ရှိပါတယ်…ဒီလိုကျောက်တွေကဘဲအောင်ရင်ဘဝပြောင်းသွားအောင်…အောင်တာပါ.. တကယ်လို့မအောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းသခင်ကိုမပစ်ပယ်တာမို့အများကြီးနစ်နစ်နာနာမဆုံးရှုံးပါဘူး….ဒါနဲ့ခုနကကျနော်သတင်းကြားတဲ့အသားဆန်းအရည်စွဲကျောက်ကိုတိုက်တဲ့ပွဲစားကိုစုံစမ်းတော့ ကျနော့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတာမို့သူ့အခန်းသွားပြီးကျောက်ကြည့်ရအောင်ပြောတဲ့အခါ ကျောက်ကသိန်းငါးရာနဲ့တိတ်စီးထားပြီးဖြစ်နေတယ်.. သူများတိတ်စီးထားပြီးဖြစ်နေတာမို့မနက်ဖြန်မတည့်ရင်ကျနော့ကိုအရင်ပြပေးဖို့မှာပြီးပြန်လာခဲ့တယ်… မနက်ရောက်တော့ကျနော့လာပြတဲ့အခါအသားကဆန်းရုံမကဘဲဘော်ဒီအပွင့်တောင်ထုတ်လို့၇တာတွေ့ရပါတယ်….အမြုပ်နဲနဲပါပေမယ့်အရည်ပေါ်မှာတော့မတွေ့ရပါဘူး…မန်းအခြေကလည်းကောင်းတာမို့ကျနော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ကျောက်မျိုးဖြစ်နေတယ်…ကျနော့်အမြင်အရ ထောင်ကျောက်ဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်.. ဒါနဲ့ကျောက်ကိုသိန်း၅၈၀..နဲ့ဝယ်ယူပြီးမန္တလေးချရောင်းရာမှာ..သိန်း၁၃၅၀..ရောင်းရပါတယ်…ဒီကျောက်နဲပတ်သက်လို့ကျနော်ဝယ်တာများသွားပြီဆိုပြီးလူတိုင်းကပြောနေကြပါတယ်…ကျောက်မှာဆရာမရှိပါဘူး.. ကျနော်ကျွမ်းကျင်တဲ့လိုင်း(မေဂျာ)တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျနော်ကတော့အဝယ်ချောင်တယ်လို့တောင်မှတ်ထားပါတယ်… ကျနော်သိန်း၁၃၅၀နဲ့ရောင်းတာကိုမယုံတဲ့လောပန်းကြီးတယောက်ကဘာပြောသလဲဆိုရင်..”ဒီလိုကျောက်မျိုးထောင်ပိုင်းရလို့ကတော့ဘယ်ကျောက်ဖြစ်ဖြစ်မျက်စိမှိတ်ပြီးလက်နဲ့စမ်းဝယ်တော့မယ်”ဆိုပြီးပြောပါတယ်…ဒီကျောက်ကိုသူကသိန်း၃၀၀..ဘဲပေးပြီးလွတ်လိုက်တာလေ…ငါသိငါတတ်ဆိုပြီးဘယ်ကျောက်ကိုမှဆရာလုပ်လို့မရပါဘူး..တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိအမြင်မတူလို့သာကျောက်လုပ်စားလို့ရနေကြတာပါ…ကျနော်သိန်း၂၀၀..ကြိုက်တဲ့ကျောက်ကိုသူများသိန်း၅၀၀..ပေးဝယ်သွားတာရှိပါတယ်…ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့လိုင်းမှာကိုယ်မမြင်တိုင်းသူများဝယ်တာများသွားပြီပြောလို့မရပါဘူး… ဆင်ဦးစီးကဆီမဖိတ်အောင်မထည့်တတ်ပါဘူး…ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာကြတာပါဘဲ။ပထမဆုံးဝယ်တဲ့ကျောက်မှာဘဲLuckyဖြစ်ပြီးကျောက်မြတ်ခဲ့တာမို့ကျောက်ရောင်းခဲ့တဲ့ညကပျော်လွန်းလို့အိပ်လို့တောင်မပျော်ခဲ့ပါဘူး…
အကြွေးပေးတဲ့ 4000 ကျပ်တန်ကျောက်မှ သိန်း ၂၀၀၀ ရတဲ့ အဖြစ်
လုံးခင်းရွာလေးကို လင်မယား၂ယောက်တက်လာပြီး အလုပ်လာလုပ်ကြသတဲ့။အသက်ကတော့ ၅၀ ကျော်နေပါပြီ။ယေက်ျားဖြစ်သူဟာ လက်သမားမးအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ပါတယ်။မယားဖြစ်သူကတော့ ကောက်ညှင်းထုပ် မုန့်ဖက်ထုပ် တိုဟူးသုပ် စတာတွေကို ရောင်းပါတယ်။ ယောကျာ်းဖြစ်သူကလည်း ဝင်ငွေပုံမှန်ရတဲ့ လက်သမားအလုပ်ကိုသာ…
ဖားကန့်မှ တရုတ်သို့ ကျောက်စိမ်းမှောင်ခိုသယ်ရာ လမ်းကြောင်း ၁ သို့မဟုတ် ပိုးလမ်းမကြီး
အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ဖားကန့်မှ တရုတ်သို့ ကျောက်စိမ်းမှောင်ခိုသယ်ယူသော ပိုးလမ်းမကြီး အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလမ်းမကြီးမှ ကျောက်စိမ်းသယ်ယူရာတွင် ဝန်တင်လားမြင်းတို့ကို အသုံးပြုကြသည်။တောတောင်ထူထပ်၍ လမ်းပန်းမရှိ လားလမ်း လူလမ်းသာရှိသည်။ တနိုင်းမြို့အနီးမှဖြတ်ကာ မြစ်ကြီးနားမြောက်ဘက်သို့ရောက်အောင်သွား၍…